विकास बैंकहरुको यसकारण घट्न थाल्यो ब्याजदर, कसको कति ? « Aarthik Sanjal विकास बैंकहरुको यसकारण घट्न थाल्यो ब्याजदर, कसको कति ? – Aarthik Sanjal
विकास बैंकहरुको यसकारण घट्न थाल्यो ब्याजदर, कसको कति ?
१८ फाल्गुन २०७६, आईतवार ०८:०८
काठमाडौं । केही महिनायता बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य रकम (तरलता) क्रमशः सहज हुन थालेको छ । यसको पुष्टि राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुको बेस रेट (आधार दर) ले गरेको छ । दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक सहित प्रायः सबै वित्तीय संस्थाको बेस रेट घटेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सहज भएसँगै बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर पनि घटाउन सुरु गर्छन् । निक्षेपको ब्याज तल झरेपछि त्यसको लागत कम पर्न थाल्छ । निक्षेपको लागत कम हुँदा बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउन सुरु गर्छन् ।
अहिले वाणिज्य तथा विकास बैंकहरुले धमाधम ब्याजदर घटेको सूचना सार्वजनिक गर्नुको प्रमुख कारण पनि यही हो । बैंकहरुले बेस रेट (आधार दर) लाई आधार मानेर कर्जाको ब्याज दर निर्धारण गर्छन् । यसर्थ, बेस रेट तल झर्नु भनेकै कर्जाको ब्याजदर पनि घट्नु हो भनेर समेत बुझ्न सकिन्छ । बैंकहरुले बेस रेटमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर तोक्ने गर्छन् । यसकारण बेस रेट घट्दा कर्जाको ब्याजदर पनि घट्न गएको हो ।
बैंकको आवश्यकता र क्षमतालाई आधार मानेर बेस रेटमा केही प्रतिशत प्रिमियम थपी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था छ । यता, ब्याजदर घट्दा दुई किसिमले सेयर बजारलाई फाइदा पुग्छ । एउटा, निक्षेपमा कम ब्याज पाइन थालेपछि निक्षेपकर्ताहरु बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा सेयर बजारमा लगानी गर्न उत्साहित हुने गर्छन् । यसले सेयर बजारमा माग सिर्जना गरिदिन्छ । फलस्वरुपः माग र आपूर्तिकै नियम अनुसार पनि सेयर बजार माथि जान थाल्छ । किन भने यसले क्रमशः सेयरको आपूर्ति कम हुन थाल्छ । माग भने बढेको बढ्ै गर्छ ।
अर्को भनेको, सेयर धितो कर्जा सस्तो हुँदा आम लगानीकर्तामा सेयर बजारमा थप लगानी गर्ने सामथ्र्य वृद्धि हुन्छ । यसबाहेक पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले एकातिर घर तथा हायर पर्चेज कर्जामा कडाई गरेको छ भने अर्कोतिर सेयर धितो कर्जामा ६५% सम्म ऋण लिन पाइने व्यवस्था छ । यसबाट आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर कर्जालाई थप प्राथमिकता दिने अनुमान छ । यसको सकारात्मक प्रभाव सेयर बजारमा पर्नेछ । यसैक्रममा हामीले राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको बेस रेट कति छ भनेर हेरेका छौं ।
८ राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको बेस रेट घट्यो
नेप्सेमा सूचीकृत ११ विकास बैंकमध्ये ८ को बेस रेट घटेको छ । यस्तै, २ बैंकको भने बेस रेट बढेको छ । बेस रेट बढ्नेमा कामना सेवा र कैलाश विकास बैंक रहेका छन् । यता, शाइन रेसंगा डेभलपमेन्ट बैंकको भने बेस रेट गत वर्ष कै यथावत रहेको छ ।
यद्दपि, यसको बेस रेट नै अहिले सबैभन्दा थोरै १०.२३% रहेको छ । यसअवधिमा सबैभन्दा धेरै बेस रेट घट्नेमा देवः विकास बैक परेको छ । यसको बेस रेट १.७५% ले घटेर ११.०२% मा आएको छ । सबैभन्दा धेरै बेस रेट कमना सेवा विकास बैंकको ११.८६% रहेको छ ।
१८ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १७:५३
१८ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १४:५९
१८ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ११:२५